Home / Stop Worrying What Other People Think about You
▪️ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး နေ့ရက်ချိန်ခါတွေဆိုတာ အများက ငါ့ကို ဒီလို မြင်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမြင်တွေကိုဖျောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လက်ခံနိုင်တဲ့ အချိန်အခါပါတဲ့။
▪️ကျွန်တော် အများစု ဖြစ်ဖူးကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဥမမာ Group Meeting တွေလို လူအများကြားမှာ ဒီလို လုပ်လိုက် ပြောလိုက်ရင် လူတွေ ဘယ်လိုများ မြင်မလဲ ? ဆိုတဲ့ အတွေးက အရင်ဆုံး ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတတ်တာမျိုးပေါ့။
▪️ကိုယ်ပြောမယ့် မေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာထက် လူတွေက ဘယ်လိုမြင်မလဲ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျိုး ကို အရင်တွေးတောပူပန်နေရတာမျိးပေါ့။
▪️ဆိုတော့ အများအမြင်နဲ့ ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှုနေမှာလဲ? ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ဘာကြောင့်များ လူအများအမြင်ပေါ်လိုက်ပြီး တံဆိပ်နှိပ်မှာလဲ ?
▪️ဒီလိုပြောလို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ နေနေပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အများအမြင် ကို ဂရုမစိုက်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမဆို အနုတ်လက္ခဏာ ဆောင်ပြီး ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတဲ အခါ ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘာကြောင့် ဂရုမစိုက်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အချိန်ခဏလေး ပေးပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
☑️ ကိုယ်ပိုင် တန်ဖိုးကို သိပါစေ။
သင်က အိမ်မှာ Freelancer အဖြစ် အဆင်ပြေစွာ ရပ်တည်နေနိုင်တယ်ဆို အသက် ၂၀ကျော်မှာ လူတိုင်း အလုပ်ကိုယ်စီ အတည်တကျနဲ့ သွားလာနေကြပြီလို့ အများသူငါ ကဲ့ရဲ့ ပြောဆိုနေတာကို ရင် ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ဂရုစိုက်ပြီး အားငယ်နေစရာမလိုပါဘူး။ သူ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိရင် Gym သွားတိုင်းက ဝနေပြီနော် ပိန်နေပြီလို့ ပြောဆိုနေတဲ့ စကားတွေက နားထဲတောင် မဝင်သလို။ ဒါက အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာပေးတာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ်က ဘာလုပ်ချင်တယ် ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ရွေးချယ်မှု တွေက ကိုယ်တိုင် စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိပြီး ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင် သိနေဖို့လိုအပ်တာပါ။
☑️ ကိုယ်ပြဿနာဘဲ စိတ်ဝင်စားပါ။
ဥပမာ - ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ မေဂျာ နှစ်ခု ဘယ်ဟာများ ရွေးရပါ့မလဲ ဆိုပြီး စိတ်ပူပါ။ ငါ ဒီမေဂျာ ရွေးလိုက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဘယ်လို ထင်ကြတော့မှာလဲ ဆိုတာမျိုးက သင့်ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။
ငါ ဒီအင်္ကျီဝတ်လိုက်ရင် သက်တောင့်သက်သာရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုက သဘာ၀ ကျပါတယ်။ ငါဝတ်သွားရင်တော့ လူတွေက ဘယ်လို ပြောတော့မှာပဲ ဆိုတာတွေက သင့် ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ် ၊ ကိုယ် တွေးထားတဲ့အလုပ် တွေကို အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်တတ်ပါစေ။ ကိုယ့်ပြဿနာကိုပဲ ဦးတည် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ပါစေ။
☑️ အခြေအနေဆိုတာ နားလည်ပါစေ။
ကလေးဘဝနဲ့ ဥပမာပေးရရင် ကိုယ်မတွက်တဲ့ သင်္ချာတစ်ပုဒ်ကို အဖြေမှားတဲ့အခါ ဘေးက မတွက်တဲ့ လူအချင်းချင်း ထိုင်လှောင်နေတာကို ရှက်စရာ မလိုပါဘူး။
ကိုယ့် ဆရာက ရှင်းပြနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ စနစ်တကျ သင်ယူတတ်ပါစေ။ ဒီသဘောတရားကို လက်ခံတတ်ဖို့ပါပဲ။
☑️ ကိုယ်မှားတယ်ပြောတိုင်း တကယ် မှားမသွားဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။
အသုံးမကျလိုက်တာကွာလို့ ဝိုင်းပြောကြတိုင်း ကိုယ့် အရည်အချင်းတွေက တကယ်ပဲ ကျဆင်း သွားတာလား? မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် အမှားလုပ်မိရင်တောင် လူတိုင်းက အမှားနဲ့ မကင်းတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းက အမှားလို့ ပြောလို့ ကိုယ့်တန်ဖိုးမှာ တွက်ဆ တုံ့ပြန်မှု မှားမသွားဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။
☑️ လူတိုင်းက တကယ် ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး။
ချီးမွမ်း ၇ရက် ကဲ့ရဲ့ ၇ရက် ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့။ လူတိုင်းက ကိုယ့် နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ ကိုယ် ရှုပ်နေသူကြီးပါ။ ငါ ဒီလို လုပ်ရင် အဆင်ပြေပါ့မလား လူတွေ ဘယ်လိုများ ထင်ကြမလဲ ဆိုတဲ့အတွေးက ဆယ်ယောက်မှာ အနည်းဆုံး ၇ ယောက်လောက်က တွေးတော နေကြသူချည်းပါ။ ဒါကြောင့် အများအမြင်ထက် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ဂရုစိုက်ကြရအောင်လား။
▪️ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အများအမြင်ပေါ် လိုက်ပြီး စိတ်ကျဉ်းကျပ်စွာ နေထိုင်ဖို့ ဘဝက တိုးလွန်းပါတယ်။
ကိုယ့်တန်ဖိုးကို အများကို တံဆိပ် ပေးမနှိပ်လိုက်ပါနဲ့။
▪️ ကိုယ့်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိရှိ အမှန်ကန်ှဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုး ကို ရှင်သန် တည်ဆောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။